राजनीति केपी ओलीले किन फिर्ता मागे भीम रावलको राजीनामा ? - Nayabulanda.com
राजनीति केपी ओलीले किन फिर्ता मागे भीम रावलको राजीनामा ?
नयाँ बुलन्द ५ श्रावण २०७८, मंगलवार ०८:२३ 309 पटक हेरिएको
काठमाडौं : नेकपा एमालेको आठौं महाधिवेशन २०६५ सालमा बुटवलमा भएको थियो । त्यो महाधिवेशनमा एमाले नेता भीम रावल सचिवका उम्मेदवार बनेका थिए । तर, रावलले सचिवमा हारेपछि केन्द्रीय सदस्य पदको सपथ ग्रहणसमेत बहिस्कार गरे ।
आइतबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने क्रममा ३३ जना एमाले सांसदले पार्टी निर्देशन मानेन । यसरी पार्टी निर्देशन नमान्नेहरुमध्ये केहीले देउवाको पक्षमा मत दिए भने केहीले तटस्थ बसेर निर्देशनको अवज्ञा गरेका थिए । तर, आइतबार बसेको एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकले भने देउवाको पक्षमा मतदान गर्ने २२ जनालाई मात्रै स्पष्टीकरण सोधेको छ । बाँकी ११ जना तटस्थ बस्नेहरुका बारेमा एमाले मौन बसेको छ । तटस्थ बस्नु भनेको पनि पार्टी निर्देशन अवज्ञा गर्नु नै हो तर उनीहरुमाथि किन कारवाही वा स्पष्टीकरण सोधिएन ? यसबारेमा एमाले नेताहरु बोल्न डराइरहेका छन् ।